Iindaba zesiXhosa zika 11:00, 11 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa zika 11:00, 11 eyoMga 2018
Abanikezeli ngoncedo bafuna uphululo lomphefumlo
Abanikezeli ngoncedo ababini beli leKapa bafumana uphululo lomphefumlo emvakokuba bebehlaselwe kabukhali ngelixa beyokunceda eSeawinds kude kufuphi ne Muizenberg. Esisixeko besikwimeko apho abahlali bengavumeli iinqwelo zoncedo lokuqala zingakhatshazelelwa ngamapolisa. Ngelixa bekukho iziganeko zohlaselo ezingama shumi amahlanu anesithandathu kwinkonzo ezingxamisekileyo kulonyaka kuphela. Usihlalo wePolice Forum umnumzana uLucinda Evans uxelele amapolisa eMetro iEMS ukuba lento inganceda ukuba ukunciphisa ukulinda okumandla koncedo lwamapolisa okuba azokukhaphazelela iinkonzo ezingxamisekileyo. Omnye wabanikezeli ngoncedo uthe ngelixa lentlekele isenzeka ngexesha lomsebenzi, abakhange balifumane uncedo lwamapolisa. Bathunyelwa kwizikhululo zamapolisa ezahlukeneyo.
uOmotoso ulindeleke utyela ikhrismesi emjiva
Ulindeleke ukuba atyele enye ikhrismesi eqamele ngenqindi emjiva umfundisi osematheni nodal’iintetha uTimothy Omotoso. Elityala lokunukuneza ngokwesondo nokuxhwila ngokunxamnye noOmotoso kwakunye nabasetyhini ababini lihlehliselwe inyanga yomdumba kunyaka ozayo. Abatyholwa bebevele phambi kwenkundla ephakamileyo yaseBhayi izolo ukanti lomfundisi wabanjwa kwisikhululo seenqwelomoya kunyaka ophelileyo, za kamva kwabanjwa oogxa bakhe bobabini ngezityholo zokurhwebeshela abantwana abangamantombazanana nabasetyhini abasakhulayo ekuhlukunyezweni ngokwesondo.
uMbutho wamanina kaKhongolose ume kunye namanina axhaphazwe ngokweSondo
Iphiko lamanina kumbhutho kakhongolose livakalise ukuba lizakuma ngaxhathalinye nomncedisi kaPule Mabe otyholwe ngokumxhaphaza ngokwesondo. Eliphiko lamanina lithi lizakudibana nonobhala jikelele walombutho uJessie Duarte ukuze bafumane umkhombandlela malunga nokuba loluphi na uncedo olunokufumaneka ngelinge lokunceda ixhoba. Oku kulandela emva kokuba lombutho ungqinile ukuba wayifumana imbalelwano yesikhalazo sokuxhaphaza ngesondo ngokunxamnye noPule Mabe. Iingxelo zihambise ngelithi ixhoba lazichaza ngokucacileyo iziganeko ezibini zokuxhaphaza ngokwesondo atyholwa ngazo lokaMabe nantoleyo idale ukuba umbutho kakhongolose useke igqiza lezikhalazo nxamnye noMabe nokuze kuqhutywe noluleko lwangaphakathi ukususela ngomso. Kulengxelo kutyholwa ngelithi eziziganeko zehle kulonyaka esokuqala senzeka kwi hotele yase St Goerges ePitoli ze esesibini sehla eLimpopo, ukanti umbutho uhambise ngelithi awuzokunikela ngoluvo lwawo de kube kuqosheliswe lonke lentsindabadala kodwa ukuzakuthi ga ngoku akukayiwa emapoliseni ukuyakubika esisithwakumbe.
Bazovela enkantolo abantu bebebanjwe befunyenwe nentsango
Balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla kamantyi namhlanje abarhanelwa abahlanu ababanjwe befunyenwe neziyobisi. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngusomlomo wabakwanqawayiphuzwa uCaptain FC van Wyk ababatyholwa babanjwe kwiziganeko ezahlukeneyo nanjengoko kuqale kwabanjwa abarhanelwa ababini abafunyenwe neengxowana ezisixhenxe ze cocaine kwakunye nenye yomthunzi weenkukhu eKensington, kamva lamapolisa amxhelomnye afumene iingxowana ezilishumi elinesine zetik, ezingamashumi mabini zentsangu kwakunye neshumi elinesithathu zemidiza yentsangu nalapho kubanjwe umrhanelwa omnye eLavender Hill ze kwabanjwa owasetyhini kwakunye nendoda eFawley Court
Motswaledi ulibhengezile igama lomphathi wezempilo
Umphathiswa wezempilo kweli lomzantsi afrika uAaron Motsoaledi ude wabe uyalibhengeza igama lomntu ozakongamela inkonzo yezempilo kwabo baphazamiseke ngokwasengqondweni. Okukuchongwa kukanjingalwazi Dan Mkhize kulandela emva kokuba ingqonyela ejongene nezikhalazo kwelasebe uMalegapuru Makgoba ebhalile ze wayalela ukuba kwenjiwe njalo kwingxelo yakhe ibijoliswe kwizityholo zokungaphatheki ngendlela kwezigulane kwanokunukunezeka kwamalungelo ezigulane kwisibhedlele saseTower eBhofolo. UMkhize notshatsheleyo kwizifundo zengqondo ufumene isivumelwano sokusebenza esizinyanga ezintandathu ukuba enze utshintsho, ukanti umphathiswa udize ukuba unethemba elikhulu lokuba uMkhize uyakwenza kanye ngolohlobo.
PAC ithi makagxothwe lokaMabhida epalamente
Obefudula elilungu lepalamente kumbutho kaPoqo uLuthando Mbinda kwakunye nalowo abambene naye ngonomji Narious Moloto balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla ephakamileyo yaseKapa namhlanje. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo uMbinda ulwa isigqibo sokunikwa kwakhe uphumaphele epalamente ngelithi akukho ngqiqweni. Oku kulandela emva kokuba umbutho wePAC udize ukuba makagxothwe epalamente lokaMabinda ngelithi akaselolungu lalambutho emva kokugxothwa kwakhe kunyaka ophelileyo.